Carl Zeiss VR ONE ကိုဖြုတ်ချခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း | Gadget သတင်း
Juan Colilla | | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, မိုဘိုင်း, Virtual အဖြစ်မှန်, reviews
Virtual reality သည်အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာနေသည်။ Oculus Rift, Project Morpheus, Microsoft HoloLens နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနည်းများကဘာဖြစ်မည်ကိုမှတ်သားနေသည်။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံအသစ်နှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၏အနာဂတ်.
ဤထုတ်ကုန်များတရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွင်ရှိပြီးသားစျေးကွက်၊ virtual reality ၏လက်လှမ်းမီမှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းသောအရာကို၏) အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဂူးဂဲလ်ကဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာဖြင့်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများတွင် virtual နှင့်တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်ကိုအသုံးပြုရန်ကဒ်ပြားအကွေးတစ်ခုက Google Cardboard ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကမ္ဘာသစ် တီထွင်သူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်၊ ထိုအတွေးအခေါ်ကို အခြေခံ၍ အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခဲ့ကြသူများ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နှင့်စမတ်ဖုန်းမှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲအခြားသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပြီးပုံဖော်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့၏မျက်လုံးများကိုမြင်ရသကဲ့သို့အမှန်တကယ်ပင်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးအမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်သူများကစီးပွားဖြစ်ဗားရှင်းများကိုစတင်ထုတ်လုပ်လာကြသည်။ ဤ VR သံခမောက်၏ရှေ့ပြေးပုံစံသည်အများပြည်သူအတွက် Google Cardboards၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Lakento, Homido၊ Cardboard ၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ၊ Samsung Gear VR ကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများရှိသည်။ စသည်တို့ကို ... ယနေ့ငါတို့သင်တို့ကိုဖြစ်နိုင်သည်တဆောင်ခဲ့ရမည် ဘုရင်၏ရာထူးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦးကံမကောင်းတာက Samsung နဲ့ Gear VR တို့ရဲ့အမြင့်မှာမဟုတ်ဘူး။
1 သူ Carl Zeiss VR ONE
သူ Carl Zeiss VR ONE
ငါပြောနေတာပါ သူ Carl Zeiss VR ONEအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သောဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသော virtual reality သံခမောက်လုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုဆွဲတင်ပြီးကောင်းသော၊ ဆိုးသောအမြင်များကိုကွဲပြားစေသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏အစတွင်သင့်ထုတ်ကုန်အားဖြုတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်နှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည် သူ Carl Zeiss VR ONE virtual reality ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် ၄.၇ လက်မမှ ၅'၂ လက်မအကြားရှိဖန်သားပြင်များပါ ၀ င်သောသူများအတွက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒီစက်မှာ Bluetooth command ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် actuator မရှိပါ။ ၎င်းကိုခွင့်ပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ကြည့်ပါ။
ဒီထုတ်ကုန်၏အားသာချက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုတည်ရှိသည်Carl Zeiss သည်သူ၏နောက်ကွယ်တွင်မှန်ဘီလူးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Google Cardboards နှင့်မတူသည်မှာသင်သည်မူးဝြေခင်း၊ မျက်စိပျက်စီးခြင်းနှင့်အများဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ဒီကိရိယာမှပေးသောဖြစ်နိုင်ခြေများသည်ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများသို့လည်ပတ်ခြင်း၊ ဂိမ်းများကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောခံစားမှုများကိုဖြတ်သန်းခြင်းအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့် VR မျက်မှန်များကိုကြင်နာသော Oculus အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သော Intugame VR ကဲ့သို့ကြီးမားသည့်အရာဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုလူရှေ့တွင်ပြဲ။ ပျော်မွေ့ပါ။
Carl Zeiss မှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်မျက်ကပ်မှန်။
မျက်နှာပြင် 4'7 မွ 5'2 "ကြားရှိမည်သည့်စမတ်ဖုန်းနှင့်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များအားလုံးနီးကပ်စွာရှိနေရန်နှင့် VR အသုံးချပရိုဂရမ်များအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည့်ဗဟို app ။
Third-party apps များနှင့်သဟဇာတ။
စမတ်ဖုန်းအနည်းငယ်သာတရား ၀ င်ထောက်ပံ့ထားသည်။
ယခုထုတ်လုပ်သူ တရားဝင် ၆.၇ လက်မအရွယ် iPhone6နှင့် Samsung Galaxy S4 ၅.၁ လက်မစမတ်ဖုန်းများကိုတရားဝင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Nexus 3၊ LG G5နှင့် G3 နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များအတွက် 4D အစီအစဉ်များရှိသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းသည် ၄'၇ မှ ၅'၂ လက်မအကြားရှိဤသံခမောက်လုံးကိုသာထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သငျသညျသဟဇာတကွန်တိန်နာလိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်သင့်ထက်ပို€4ထက်ကုန်ကျသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့စမတ်ဖုန်းတွေမှာ virtual reality ကိုဘယ်လိုကမ္ဘာကဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာကို "စစ်တမ်းကောက်ယူမှု" လုပ်လိုပါတယ်။ Carl Zeiss ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတိုးတက်အောင်အထောက်အကူပြုမယ့်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေချင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းရန်အခြား, မှတ်ချက်များအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ:
[poll id = » 13 poll]
[poll id = » 14 poll]
ထုတ်ကုန်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလျှင်အထူးဂရုပြုချင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်လုံလောက်သောတုံ့ပြန်ချက်ရရှိလျှင် ငါနဲ့ဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ် Carl Zeiss အတွက် လုံးဝအသစ်က VR ONE များအတွက် giveaway.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Carl Zeiss VR ONE ကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
WWDC ၂၀၁၅ မှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာ